Jooji Shirkadaha ceebta ah ee damiinta ka ah Baraha Bulshada iyo Suuqgeynta Nuxurka | Martech Zone
Waxaan u kuur galayay qaab sanadkii la soo dhaafay oo aan aaminsanahay inay tahay wax aad u dhib badan… ceebaynta shirkadaha ay u gaystaan ​​hogaamiyaasha la ixtiraamo ee warshadaha suuq geynta markay go'aansadaan inay yareeyaan ama badalaan barahooda bulshada ama xeeladaha ay ka kooban yihiin.
Si daacad ah ayaan uga daalayaa.
Waa tan cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Twitter-ka ee ka socota LUSH UK oo qabata shaqo aan caadi aheyn oo ku tilmaamaysa caqabadahooda ganacsi iyo sida ay uga jawaabi doonaan. Fadlan dhagsii oo akhri silsiladda cusbooneysiinta oo dhan.
Waxaan u beddeleynaa bulshada.
Marba marka ka dambeysa, baraha bulshada ayaa sii adkeynaya oo nagu adkeynaya inaan si toos ah u wada hadalno. Waan ka daalnay inaan kula dagaallano algorithms, mana dooneyno inaan lacag ku bixinno si aan ugu soo muuqanno boggaaga. pic.twitter.com/nJUzG0lham
Halkaas ha ku joojin, in kastoo. Akhriso dhamaan, taxanaha fekerka leh. Kadib aqri sida suuq geynta madaxda ayaa ka jawaabaya. Waxaan u maleynayaa in dhaliishooda iyo jawaabahooda diidmada ah aysan kaliya aheyn mas'uuliyad darro, ay yihiin kuwo dayacan.
Kuwani warbaahinta bulshada iyo suuqgeeyayaasha content iibiyo warbaahinta bulshada iyo waxyaabaha ku jira. Iyaga ayaa ku wanaagsan, laakiin taasi micnaheedu maahan in istiraatiijiyadooda ay u shaqeyso shirkad kasta. Maaha
Waxay u egtahay in warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta waxyaabaha ay yihiin saliidaha CBD ee warshadaha suuqgeynta… daawo u ah cudur kasta oo saameyn ku yeelanaya ganacsigaaga. Ma ahan.
Waxaan ahay CMO kiro shirkado badan. Waxaan la shaqeeyay qof kasta oo ka socda GoDaddy, Dell, iyo Chase illaa shirkadaha ka hortagga cayayaanka iyo saqafka. Shirkadaha qaar, istiraatiijiyad adag oo bulsho iyo nuxur leh ayaa sameysay dareen dhaqaale oo wanaagsan. Soo noqoshada maalgashiga koritaanka wacyiga iyo la xiriirka dhagaystayaasha ballaaran ama bulshada ay leeyihiin waa wax cajiib ah.
Laakiin taasi maahan shirkad kasta.
Waar waa yaabe adiga. Anigu waxaan ka mid ahay shirkadahaas.
Mawduucyada iyo xeeladaha bulshada ayaa ii oggolaanaya inaan ku ekaado joogitaankayga warshadayda. Aqoonsiga iyo wacyigalinta ayaa ka caawiya ganacsigeyga, laakiin gabi ahaanba ma abuuraan dakhli ka badan waqtiga iyo kharashka wax soo saar hal abuur leh iyo warbaahinta bulshada. Heck, marar dhif ah xitaa ma arki doontid fiidiyow aniga mar dambe. Iyo haa… waad dhaliili kartaa joogitaankeyga internetka maalintii oo dhan… waxaadna heli kartaa tan la hagaajin karo ama si fiican loo qaban karo.
Laakiin ka dib 11 sano oo ganacsi ah, waxaan kuu sheegi doonaa tan… Waxaan ku hadli karaa dhacdo kasta, waxaan ku jiri karaa liis kasta oo suuq-geyn ah, wararka xayeysiiska ah ee warbaahinta bulshada oo dhan, oo waxaan qori karaa laba qoraal oo blog ah oo la yaab leh maalintii… xitaa ma imaaneyso ku dhow iswaafajinta dakhliga aan ku gaaro Isgaadhsiinta iyo erayga afka. Waxaan ku qaatay lacag aad u tiro badan, dadaal, iyo waqti dadka ku dhex jira warshadayda si aan u qaabeeyo, u horumariyo, una soo saaro waxyaabo la yaab leh iyo - in kasta oo ay i dareensiisay, ma bixin biilasha. Waxaan soo maray nashqadeeyayaal waqti-buuxa ah, qoraayaal maaddooyin ah, la-taliyayaal baraha bulshada, iyo sawir qaadeyaal aniga shaqooyin aan caadi ahayn ii qabtaan. Ma aysan shaqeyn. Muddada.
Maxaa ii Shaqeynaya
The natiijooyinka inaan awoodo inaan gaaro macaamiishayda, oo tayo leh ee wax soo saarka shaqada, ka qiimaha shaqadaas, iyo hadalka afka ee ay bixiyaan ganacsigeyga ayaa horseeday kasta hawlgal ballaadhan oo meheraddaydu yeelatay.
Wax kale xitaa iskama dhowa. Waxba.
Marka, inbadan oo macaamiishayda ka mid ah, waxaan dhab ahaan kula taliyay ka-hortagga maalgashiga warbaahinta bulshada iyo istiraatiijiyadda nuxurka leh. Taasi waa sax… waan iri.
Waxaan haystay bilaw dhalinyaro ah oo gaadhay qurxinta. Qiyaas waxa Dadka qurxinta qurxiya cagtooda ayay ku jiraan maalintii oo dhan iyagoo isku dayaya inay nolol maalmeedkooda daboolaan. Ma aysan aqrinin maqaallada ama cusbooneysiinta warbaahinta bulshada… waxay ka shaqeynayeen dabadooda. Si kastaba ha noqotee, kuwa qurxinta qurxinta ku guuleysta waxay gabi ahaanba qaadan doonaan fasax si ay u aadaan shirarka si ay u arkaan tiknoolajiyada ugu dambeysay. Waan ka wada hadalnay aniga oo lacag ila bixinaya waxaanan u sheegnay inay shirar badan qabtaan! Wayna shaqeysay.
Shirkadahayga maxalliga ah waxay si aan caadi aheyn u qabtaan si heer sare ah iyagoo la xiriira macaamiisha oo ay codsadaan qiimeyn iyo dib u eegis ka badan kaqeybgalka warbaahinta bulshada iyo riixitaanka waxyaabaha. Marka, waxaan dhisnay gabagabeyn maktabadda iyadoo lagu saleynayo xilliyeed waxaanna sii wadeynaa inaan sare u qaadno qoraalladooda jadwalka iyo dib loogu ballamiyay bartooda iyo baraha bulshada. Waxaan u arkaa koboc laba-god ah labada shirkadood ee aan tan ku qabannay iyada oo loo marayo taraafikada mashiinka raadinta. Ma jiro nuxur cusub, oo aan joogin warbaahinta bulshada oo waqti-buuxa ah… kaliya waa aasaas wax ku ool ah oo talo bixin leh dadaal kasta oo kale oo tagaya adeegga macaamiisha iyo ka-qaybgalka shakhsi ahaaneed.
Waxaan hayaa shirkad kale oo daawata cusbooneysiinta cimilada, ka dibna ku wareegeysa xaafadaha ay duufaantu saameysay si ay u sameeyaan kormeer bilaash ah. Ma ogtahay waxa ka fiican marka loo eego warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta waxyaabaha iyaga loogu talagalay? Albaabada hangar. Soo celinta weyn ee maalgashiga.
Waxaan hayaa bilow cusub oo tiknoolajiyad ah oo u gaajoonaya kheyraadka oo aan haba yaraatee lahayn wax aan ku garaaco tartamayaasha waaweyn ee suuqooda ku qarash gareeya malaayiinta isla markaana leh kooxo dad ah. Intii aan waqti ku lumin lahayn layn soosaaris ah oo ka kooban waxyaabo iyo bulsho, waxaan bil ku qaadnaa spend mararka qaarkoodna in ka badan… soo saarista iyo dhiirrigelinta hal nuqul. Qiyaas waxa Way shaqaysaa Mawduucaas ayaa la wadaagay oo la helay oo kaxeeyey MQL-yada ka badan istiraatiijiyad kasta oo kale.
Waxaan leeyahay shirkad tiknoolajiyad aad u guuleysata oo adduunka laga aqoonsan yahay sida hogaamiyaha in ay warshadaha for hal-abuurnimo. Waxaan si adag uga shaqeynay waxyaabo aan caadi aheyn oo lala wadaagay tan warshadaha. Waad ogtahay waxa si fiican u qabtay? Buug-yaraha boosta maamulayaasha. Sababta Sababtoo ah inta shaqaalahoodu ay wax ka baarayeen internetka oo ay wax ka ogaayeen shirkadda, waxay inta badan la shaqeeyeen la-hawlgalayaasha iyo dib-u-celinta si aysan farriinta ugu hor keenin kuwa go'aankooda gaara. Waxaan dul marnay madaxooda oo way shaqaysay.
Waxaan haystaa shirkad kale oo aan lahayn joogitaan bulsheed ama mid toos ah oo khadka tooska ah ah. Taa baddalkeeda, waxay si weyn u maal gashadaan guusha macmiilka iyo taageerada shaqaalaha waxayna ka dhigaan la shaqaynta iyaga mid la yaab leh. Aad ugama duwana Zappos or Apple… Waxay ka dhigayaan khibrad macmiil taasi waa wax aad u layaableh in macaamiisha ay noqdaan u doodayaashooda suuq geynta Miyaad ceebaysaa kuwa shirkadaha?
Waxaan la shaqeeyay warshado si heer sare ah loo nidaamiyay oo AAN xitaa ku dhowaan karin in lala wadaago waxyaabaha ku jira qadka tooska ah ee ku saabsan warshadooda, tikniyoolajiyadooda, ama macaamiishooda. Muddada. Waxaa nalagu qasbay inaan isticmaalno xeelado kale si aan u wadno wacyigelinta, helitaanka, iyo haynta. Hal macmiil, waxaan soo saarnay codsi moobiil ah oo ka caawin doona kooxahooda cilmi-baarista xisaabinta adag iyo beddelaadyada. Waxay u shaqeysay si qurux badan.
Waxaan arkay shirkadaha teknolojiyadda ee ay xusaan Forrester iyo Gartner oo ku guuleysta horseedyo badan waxayna xiraan in ka badan sanad dhan ee wax soo saarka bulshada iyo waxyaabaha la xiriira. Waan ogahay inay weli taasi jirto… laakiin aan wajahno… dhismaheeda inta badan dhisidda sumcad iyo xiriir lala yeesho falanqeeyayaasha taas oo kaa heli doonta sheegista noocaas ah. Waan necbahay inaan jabiyo wararka, laakiin falanqeeyayaasha oo dhami ma sugayaan tweet-gaaga soo socda ama boostadaada.
Waxaan hayaa shirkad kale oo ganacsigooda ku labalaabisay degel xun, oo aan muuqan raadinta, nuxurna lahayn, iyo istiraatiijiyado warbaahineed oo bulsheed - oo aad u xanaaqi doonto sida. Waxay ka helaan hogaamiyeyaal shirkadaha shuraakada la ah, qabow wac rajo, iyo xirmo badan oo ganacsi. Mid ka mid ah dadka iibka dibadda ka shaqeeya ee halkaas ka shaqeeya ayaa xiray $ 8 milyan oo ganacsi sanadkii hore. Ka maqnaanshaha wicitaanada qabow.
Kahor intaadan ii tuurin libaaxyada, dabcan ma dhahayo bulshada iyo nuxurkaas ma'aha shaqeeyaan… laakiin iyagu ma ahan a hal cabbir ayaa ku haboon dhammaan Xal.
Miisaaniyadda, waqtiga, tartanka, waqtiga, ilaha, warshadaha of waxyaalahan oo dhan waxyaalahan oo dhan waxay u baahan yihiin in laga fiirsado bal in warbaahinta bulshada iyo xeeladaha nuxurku ay waxtar u leeyihiin ganacsigaaga.
Waxaan arkaa ganacsiyo badan oo u rogaya ilaha warbaahinta bulshada una adeega macaamiisha, ka soo saarida waxyaabaha ilaa shirarka, kafaala qaadka, suuq geynta saamaynta, iyo istiraatiijiyado kale. Iyagu waa shaqadooda oo waxay samaynayaan wixii ay ku qiyaaseen ee ay ku arkeen shaqada.
Ganacsi kastaa ma guuleysan karo warbaahinta bulshada ama qori karaan waxyaabo yaab leh. Jooji ceebaynta shirkadaha markay u dhaqaaqaan xeelado si fiican ugu shaqeeya iyaga.
Waxaa laga yaabaa in waxa aniga iiga sii daran ay tahay in dadka ugu horeeya ee ceebeeya ganacsiyadaasi ay yihiin dadka iibinta istaraatiijiyadaha warbaahinta bulshada iyo istiraatiijiyadda nuxurka oo aan lahayn aragti ku saabsan shirkadda iyo sida ay u shaqeyso. Runtii taasi waa masuuliyad daro… waxaad kaliya weeraraysaa cidkasta oo wadada ka soo horjeedda aad lacag samee.
Halkii aad ka xishoon lahayd shirkadaha, raadi shirkado aad ka iibin karto adeegyadaada kuwaas oo u baahan caawimaaddaada oo isbadal ku samayn kara.
Taasi maahan qof walba.
Jooji shirkadaha ceebeynaya.
Suuqgeynta SMS iyo Faa’iidooyinkeeda cajiibka ah